Xildhibaano kale oo Maanta lagu dooranayo Jowhar - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Xildhibaano kale oo Maanta lagu dooranayo Jowhar
Xildhibaano kale oo Maanta lagu dooranayo Jowhar
Xildhibaannada Golaha Wakiilada doad Goboleedka Hir-Shabeelle ayaa Maalintii labaad oo xiriir ah waxaa ay yeelan doonaan kulan lagu dooranayo Xildhibaano ka tirsan Aqalka Sare.
Sbalay waxaa Magaalada Jowhar lagu doortay Saddex Sanoter oo kala ah, Muuse Suudi Yalaxoow, Fartuun Cabduqaadir Karaama iyo Nuur Maxamed Geeedi (Canjeex).
Maanta ayaa waxaa la filayaa in sidoo kale la doortay Saddex Sanoter, si Maalinta Berito ah loo soo geba-gabeeyay doorashada Aqalka Sare ee degaannada Hir-Shabeelle, waxaana musharixiinta Maanta ku tartami doona Saddex kursi ay kala yihiin.
Waxaa Maanta Markale Xildhibaanada Hirshabeelle Dooran doonaan ilaa Sadex kursi waxaana ku tartami doonna.
3 :Musharax Cismaan Axmed Macow
1:Musharax Cismaan Maxamuud Dufle
2:Musharax Maxamuud Axmed Nuur tarsan
3: Musharax Raage Xasan Xuute
Ammaanka Magaalada Jowhar ayaa aad loo adkeeyay, waxaana wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa Xarunta Madaxtooyada Hir-Shabeelle lagu arkayaa Ciidamo ammaanka siweyn u xaqiijinsya.
Previous articleKhilaafka ka dhex bilaabmay hogaanka Taalibaan
Next articleShir looga hadlayo dilalka ku batay laascaanood oo Maanta furmaya